Shina Karazan-jiro sy mpamokatra Jet Mill karazana fandriana mirindra | Qiangdi
Mpanamboatra milina fanodinana vovoka izahay.
Zava-dehibe kokoa, manome endrika namboarina ho an'ny milina, ny injeniera, ny rafitra fanaraha-maso izahay mba hahafeno ny fepetra famokarana ataon'ireo mpanjifanay. Mpamatsy tetikasa izahay.
Manome izahay vahaolana ho an'ny fanodinana vovoka.
Ny milina Fluidized-bed Jet dia fitaovana toy izany izay mampiasa ny haingam-pandeha haingam-pandeha hanatanterahana ilay karazana maintso mahery vaika. Atosiky ny rivotra voahidy, ny akora dia hafafaingana amin'ny fiampitana ny nozera efatra mba ho voadona sy hatosiky ny rivotra miakatra mankany amin'ny faritry ny fikosoham-bary, voataonan'ny herin'ny centrifugal sy ny fikorianan'ny rivotra, ny vovo-tany hatramin'ny kodiarana fitetezana no hosokafana sy hangonina (ny lehibe kokoa ny sombintsombiny dia, ny matanjaka ny hery afovoany; Ireo poti-javatra manara-penitra izay mifanaraka amin'ny takiana amin'ny habe dia hiditra amin'ny kodiarana grady ary hikoriana ao amin'ny mpampisaraka ny sikilona ary hangonin'ny mpanangona.); ny vovoka hafa dia miverina mankamin'ny efitranon'ny fikosoham-bary ho an'ny fanodinana fikosoham-bary.
Naoty:Ny fanjifana rivotra avy any 2 m3 / min hatramin'ny 40 m3 / min. Ny fahaizan'ny famokarana dia miankina amin'ny tarehintsoratra manokana momba ny fitaovanao, ary azo sedraina amin'ny tobin'ny fitsapana ataonay. Ny angon-drakitra momba ny fahaizan'ny famokarana sy ny fahamendrehan'ny vokatra ao amin'ity takelaka ity dia ho anao fotsiny. Ny fitaovana samihafa dia samy manana ny mampiavaka azy, ary avy eo ny maodelin'ny fikosoham-bovoka dia hanome fahombiazana amin'ny famokarana samihafa ho an'ny fitaovana samihafa. Azafady mba mifandraisa amiko raha misy tolo-kevitra na fanandramana teknika namboarina miaraka amin'ny fitaovanao.
Ny ekipanay dia miasa mifototra amin'ny tahiry fitiliana be dia be miaraka amin'ny tatitra fitsapana 5000 mahery mihoatra ny 1000 isan-karazany avy amin'ny indostria mineraly, indostria simika, indostrian'ny sakafo sy fambolena, indostrian'ny pharma sns.
Fampidirana ny fomba fitsapana ny vokatra-manitsy ny fahamendrehan'ny vokatra mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa
Manomboha mivantana ny masinin-drafitry ny rivotra.
Atombohy ny programa PLC. Amin'ny alàlan'ny fifehezana ny refin'ny kodiarana classifer, vokatra mifehy ny famaranana.
Manampy akora simika amin'ny famoahana hopper na fitaovana famahanana. Ho an'ny laboratoara QDF-120 machine, azontsika atao ny mandray ny rivotra suction amin'ny alàlan'ny tsindry ratsy hamahanana fitaovana; ho an'ny masinina famokarana, feed feed batch na feed bag dia azo atao mba hanomezana fahafaham-po ireo fepetra takiana samihafa.
Manangona vokatra vita araka ny fomban'ny mpanjifa, azonao atao ny manangona mivantana ireo vokatra vita amin'ny siny, na mifandray amin'ny milina fanangonana.
1 .Ny fiakaran'ny maripana: tsy hitombo ny maripana satria potipotika ny fitaovana ao anatin'ny fepetra miasa amin'ny fanitarana pnemika ary ny mari-pana ao amin'ny lavaka fikosoham-bary dia mitazona ny ara-dalàna.
2. Tsy misy fandotoana: ny fizotrany rehetra dia tsy misy fandotoana satria ny fitaovana dia afindra amin'ny alàlan'ny rivotra sy ny tany amin'ny alàlan'ny fifandonana sy ny fiantraikany eo amin'izy ireo nefa tsy misy fampahalalam-baovao. Fitotoana tena tanteraka, Ka maharitra ny fitaovana ary ny fahadiovan'ny vokatra dia mifanohitra tanteraka. Ny fikosoham-bary dia ao anaty rafitra mihidy, vovoka ambany sy tabataba, dingana famokarana madio sy sariaka.
3. Fiaretana: ampiharina amin'ny fitaovana misy hamafin'ny mohs ambanin'ny kilasy 9, satria ny vokan'ny fikosoham-bary dia tsy misy afa-tsy ny fiatraikany sy ny fifandonana amin'ireo voamaina fa tsy ny fifandonana amin'ny rindrina. indrindra ho an'ireo fitaovana manana hamafin'ny avo, fahadiovana avo ary sanda ambony.
4. Rafitra fanaraha-maso milanja, avo lenta, tsy voatery, fahamarinan-toerana avo.
Famolavolana porofo mipoaka azo baomba, azo havaozina ho rafitra fivezivezena azota hihaonana amin'ny fitakiana fikolokoloana tena tsara amin'ny fitaovana oksida mora mirehitra sy mipoaka.
5.A haben'ny sombin-javatra azo atao D50: 1-25μm. Endrika tsara sombintsombiny, fizarana haben'ny sombintsombiny tery. Ny rotor mpanao sokajy avo lenta an'izao tontolo izao miaraka amin'ny hafainganam-pandehan'ny 80m / s, miantoka ny famaritana avo lenta amin'ny zavatra takiana amin'ny vokatra. Ny kodiarana manasokajy dia manasaraka ny fitaovana mandeha ho azy miaraka amin'ny airflow, tsy misy sombiny madity. Ny vokatra vovoka Powtrafine dia azo antoka sy azo antoka.
6. mari-pana tsy miovaova na maripana ambany, fikolokoloana tsy misy antonony, indrindra mety ho an'ny akoran'ny hafanana hafanana, teboka malefaka kely, siramamy, natiora miovaova.
7. tahan'ny fampiasana angovo avo lenta, mampiroborobo ny fikorianan'ny fitaovana, manatsara ny fahombiazan'ny fitiliana vovoka.
8.Key ampahany toy ny liner anatiny, fanasokajiana kodiarana sy no novetaina dia vita amin'ny seramika toy ny aluminium oksida, zirconium oxide na silicon karbida, miantoka ny tsy fifandraisana amin'ny vy mandritra ny fikolokoloana ho an'ny fahadiovana farany farany.
9. Rafitra fanaraha-maso PLC, fandidiana mora.
10.Ny motera dia azo ampifandraisina amin'ny fehikibo mba hampitomboana ny hafainganana sy hamakivakiana ny olan'ny motera haingam-pandeha raha tsy misy ny marika môtô fanta-daza.
Azo ampiasaina amin'ny andiany miaraka amina sokajin-dingana marobe mba hamokarana vokatra misy habe marobe indray mandeha.
Ny milling pneumatic QDF fluidized bed dia afaka manorotoro ireto fitaovana manokana manaraka ireto ho fanampin'ny fitaovana mahazatra.
Fitaovana henjana avo: karbida tungsten, carborundum, oksida aliminioma, oksida silikone, sidaida nitrida, sns.
Fitaovana madio madio: fitaovana enti-mitarika, seramika manokana, sns
Fitaovana mafampana hafanana: plastika, fanafody, toner, fitaovana organika, sns.
Ny vokatray dia ampiasaina amin'ny indostrialy eto ambany indrindra.Kehitriny dia nanana tsena matotra izahay teo amin'ny sehatry ny fambolena simika. Saingy tsy mijanona velively ny fikatsahantsika ny hatsaran-toetra ary afaka mianatra ny mpanjifa mba hahafahanay manome serivisy sy vahaolana tsaratsara kokoa ho azy ireo
Manaraka: Fampiasana manokana ny mill Jet-bed am-pandriana amin'ny fitaovana mafy